Barnaamijka ugu fiican ee Tweens
Barnaamijyadan loogu talagalay caruurta da'doodu tahay 9-12 waxay isku daraan qabow, xiiso iyo waxbarasho yar, sidoo kale
Tweens waxay ku xayiran yihiin adduunka oo dhan si ay u raaxaystaan ​​oo ay ku qaboojiyaan, sidaas awgeed waxaan ku dhufanay dukaamada barnaamijyada iyo ciyaaraha kuwaas oo buuxin kara shuruudahaasna wali (xaaladaha badankooda!) Waxay bixiyaan waxoogaa waxbarasho ah. OK, waxaannu qiraynaa inaanu bisadaha wax ka qabanaynin wax walbaa la sameeyo waxbarashada. Laakiin versionka Japanese ee ururinta bisadaha ayaa hubaal ah in ay hubiyaan nooca cilladda qabow illaa iyo inta ay isbeddelayaan.
Minecraft waxay ku haysay meel sare ee liiska ciyaaraha sanadka hadda, iyo sabab wanaagsan. Waa isku-dheelka ugu wanaagsan ee abuurista iyo ciyaarista. Waa LEGO ee dunida digital. Iyo sida LEGO, waa mid ka mid ah cayaaraha ay waalidiinta ku raaxeysan karaan sida carruurta, gaar ahaan marka ay la ciyaarayaan caruurtooda. Minecraft waxaa laga heli karaa kombuyuutarka iyo sidoo kale inta badan ciyaaraha ciyaarta iyo qalabka mobile. Waxaa sidoo kale jira version sheeko oo aad u jecel sida ciyaar kubadeed, laakiin waa nooca caadiga ah ee hela calaamadaha ugu sareeya halkan.
Best for Da'da: 9+
Qiime: $ 6.99 iyada oo la iibsan karo app
Waxaa laga heli karaa iPhone / iPad, Android iyo Amazon Fire
DragonBox Aljabra waa kan
Muuqaal sawireedka "Dragonbox Algebra"
DragonBox Algebra waa hab cajiib ah oo loogu diyaariyo caruurtaada aljebrada. Fikradda halkan waa mid fudud oo aad u fiican. DragonBox Algebra waxay qaadataa aasaaska aljebrada sida isticmaalka calaamadaha si loo ciribtiro dhinac kasta oo isla'eg oo si qotodheer u dheehan oo si qarsoodi ah u baraya ilmahaaga kiddo fikradaha ka dambeeya aljebra inta ay ku raaxeystaan.
Ugu fiican ee loogu talagalay da'daha :
Qiimaha: $ 7.99
Waxaa laga heli karaa iPhone / iPad iyo Android
Dooro buugaag aad u xiiseynaya oo dhan ayaa ahaa carwada 80aad iyo 90aad, iyo Lifeline, waxaa lagu soo jiiday da'da digital. Markaan sheegno in ay casriyeynayeen nooca, waxaan u jeednaa. Lifeline ayaa la kulantay wax badan oo ku saabsan ogeysiisyada ku saabsan qalabkaaga iyadoo loo marayo ciyaarta lafteeda. Waxay xitaa la macaamili kartaa Apple Watch, inkastoo aysan ahayn wax shuruud ah. Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu casriga ahi ay tahay sida ay u ciyaareyso sheeko laakiin waxaa lagu ciyaari karaa dhowr jeer si ay u soo saaraan sheekooyin kala duwan oo leh dhameey kala duwan.
Ugu Fiican Ceymiska : 11+
Qiimaha: $ 1.99
Sababtoo ah ma aha ciyaar ay caruurtaada jecel yihiin, waad jeclaan doontaan, waxaad la cayaari kartaa caruurtaada, caruurtaada waxay la ciyaari karaan saaxibadood, waadna cayaari kartaa saaxiibadaa? Madaxda kor u kaca ayaa ah qaabka dijitaalka ah. Ciyaartoygu wuxuu heystaa casriga ah ee ay wejigooda ku hadlaan halka ereyada iyo odhaahda loo soo bandhigo dadka kale qolka si ay u dhaqmaan. Marka ay cayaartu fekerkooda yareeyaan, waxay hoos u dhigaan taleefanka ama kor u qaadista si ay u muujiyaan jawaabaha saxda ah ama khaldan.
Waan ognahay. Waxaan kuugu haynaa qoraallo.
Qiimaha: Bilaashka Android, $ .99 for iOS leh iibsiyada-app ee labada platform
Sawirada Neko Atsume
Kuma yeegi doonno fikradda ah in ay jiraan wax waxbarasho oo ku saabsan Neko Atsume, oo u turjumaya "Collection Collection" ee Japanese. Sida magacu soo jeediyo, Neko Atsume xarumaha ku hareeraysan raashin meel deyr leh, oo soo jiidata carruurteeda kadibna daryeesho iyaga oo leh cunto iyo alaabo lagu ciyaaro. Waa fikrad sahlan oo laga yaabo inaysan u heesi karin dhammaan kuwa xiisaha leh ee dadka waawayn, laakiin ay ku duuban yihiin. Maxayse u tahay? Anime, Manga iyo noocyo kale oo farshaxan oo Japanese ah ayaa aad u caan ah maalmahan, sidaas darteed dabcan Japanese uurka ayaa noqon doona waxyeello.
Ugu Fiican Ciyaalka: 9-12
Qiimaha: Bilaash ah iibsiyada gudaha
Hopscotch: Samee Ciyaaraha
Pre-K iyo caruurta da'da dugsiga hoose waxay jecelyihiin inay ciyaaraan ciyaaraha. Marka ay soo galaan sanadaha dambe, badankood waxay noqdaan kuwo xiiseynaya abuurista cayaartooda. Inkasta oo Minecraft ay diiradda saareyso sida xiisaha LEGO ee loogu talogalay inay abuuraan adduunkooda ujeeda, Hopscotch wuxuu ku saabsan yahay isku xirka sawirada, isdhexgalka iyo tilmaamaha qaab aad u codeeya si loo baro aasaaska qaab-dhismeedka ciyaarta.
Barashadu waxay sameeyaan shaqo weyn oo lagu soo bandhigayo hababkaas oo ay udub dhexaad u tahay sahlan oo ku filan in caruurtu ay diirada saari karaan caqabadda abuurista ciyaar xiiso leh halkii ay ka dhalan lahayd calaamadeynta ciyaarta.
Ugu Fiican Ciyaalka: 10-12
Qiimaha: Bilaash ah qashinka ikhtiyaariga ah
Waxaa laga helaa iPhone / iPad
Kacaanka Carbinta 2
Kacaanka Carbinta 2 waa asal ahaan RISK oo ku saabsan steroids. Taxanaha isboortiga ee istiraatiijiyada istiraatiijiga ah ee ku saleysan tartanka ayaa ahaa mid ku dhawaad ​​25 sano ka hor, iyada oo loo marayo qarnigii afaraadna waxay sii wadeen booskooda sida ugu fiican ee ugu fiican. Ciyaartoydu waxay bilaabaan marxaladoodii hore waqtiyadii hore waxayna ku hoggaamiyaan qarniyo ilaa illaa casriga casriga ah iyo wixii ka dambeeya.
Qeybta xiisaha leh ee cayaartaani waa sida ay u baran karto taariikhda taariikhda marka ilmuhu ku jiro taariikhda gaarka ah. Cayaartu waxay diirada saareysaa hoggaamiyeyaasha caanka ah ee dhaqamada kala duwan iyo dhinacyada gaarka ah ee ilbaxnimadaas sida dhismayaasha caanka ah, farshaxanka iyo yaababka adduunka.
Qiimaha: $ 9.99
Sidee faa'iidooyinka suuq-galyada loogu dhejiyo cayaaraha cayaaraha
Sida loo Isticmaalayo Reddit - Koorso Burbur ah
Waa maxay Craigslist?
Raadi Qorshaha Wanaagsan ee Macaamiisha ee Qoyska
10 Qalabka Awood ee loogu talagalay La Yimaado Muuqaal Muuqaal
Sidee loo xafidaa Telefoonkaaga ama Laptop Cool
Maxaan sameeyaa fiidiyowga ku saabsan?
Maxay Tahay Geotagging?
Sida Loo Wargalinayo Telefoonkaaga ama Laptop-ka Qorshe
Ciyaaraha Flash Games Wii-Compatible
Google 101: Sidaad U Baadhi Karta, Oo U Helaan Natiijooyinka Aad Doonayso
9-tii ugu fiicnaanta 4K ee TV-yada si loogu iibsado 2017 ee ka hooseeya $ 1,000
Sida loo Helo Inbox.com ee Mozilla Thunderbird
Dib u eegid: Garmin Fit App for iPhone iyo Android
Kaararka Muusikada Muusikada Isticmaalka RealPlayer 11
Liiska Cinwaanka IP-da ee loo adeegsado Google
Sida Loo Beddelayo Cinwaanka Emailka ee Aqoonsiga (ama Magaca) ee Gmail
6 Siyaabaha loo Sameeyo Diyaarintaada FPS
Isticmaal Mac Macaamil BCC Doorasho si E-mail ugu dir kooxa
Ilaali Emailkaaga Muuqaalka Muuqaalka ee Outlook Express oo leh Password
7 Soo Saarida Miisaaniyadaha Sameeya Miisaaniyadeed ee Sameeya ee Soodhaweynaya inay iibsadaan sanadka 2018
Sida loo Helo oo loo Isticmaalo Khariidaddaada Khariidadda ee Facebook
Iibsiga Gawaarida - A Hordhac Aasaas ah
Gacalinta Gacanta Lahaanshaha Suuqa - Asaasiga
Kombiyuutarada loogu talagalay indhoolaha iyo indho la'aanta
Beddel lambarka iCloud Keychain Ammaanka iyo Lambarka Telefoonka
Nidaamyada Wakiilada Sameeya Bilaashka ah
Xakamee Macnaha Isticmaalka Siri
Sidee loo tuuraa Sawirada iPad-kaaga
Sida loo Isticmaalo Naqshad Nooc Wanaagsan ee Qoraalka Daabacaadda